Dagaal dhex marey ciidamo kala taabacsan m/weynihii hore faroole iyo m/weynaha cusub C/weli Gaas oo la joojiyey.
Dagaal kala dhexmarey ciidamo taabacsan m/weynihii hore ee puntland C/raxmaan Faroole iyo kuwo taabacsan m/weynaha cusub ee xiligan C/weli Cali Gaas kuwaas oo dagaalkii dhexmarey isaga diley labo askeri oo ah kuwa C/weli. Dagaalkan ayaa sida la sheegayo waxa uu salka ku hayey tun isugu faan iyo cudud ciidan oo...
Xukuumada tirada yar ee dr Saacid oo sadex wasiir mooyee intii kale daadku qaadey.
Xukuumadii tirada yareyd ee uu hugaaminayey r/wasaare Cabdi Faarax Shirdoon ayaa lagu soo waramayaa in ay sadex wasiir oo keliya ay kasoo laaban doonaan. R/wasaare Saacid ayaa wada isku shaandheyn xukuumada ah iyadoo la sheegayo in wasiirada la filayo in r/wasaaruhu soo bandhigo in ay gaarayaan in ka badan 20...
Murankii u dhaxeeyey shirkadaha SKA iyo FAVORI oo lasoo afjarey.
Heshiis ay gaareen labadi shirkadood ee ku muransanaa ka sheqeynta airporka Aadan cadde ayaa lagu dhameeyey khilaafki u dhaxeeyey labada shirkadood ee ka la ah SKA iyo Favori. Heshiiskan oo ay goobjoog ka ahaayeen wasirka warfaafinta iyo gaadiidka boostaha iyo isgaarsiinta ayaa labada shirkadood waxey isku afgarteen in loo hugaansamo...
Gudoomiyaha barlamaanka oo kulamo la kala yeeshey m/weynaha iyo r/wazaaraha soomaaliya.
Kadib markii ay moshin ka dhan ah r/wasare saacid saxiixeen 168 xildhibaan ayaa gudoomiyaha barlamaanka Jawaari waxa uu hada ka dhaadhicinayaa r/wasaare Saacid in uu is casilo intaan barlamaanka la hortagin. Gudoomiyaha barlamaanka oo ka soo laabtey shirkii carabta iyo afrika ay ku lahaayeen kuwait ayaa dhexda uga soo dhacey...
Barlamaanka dawlada federalka soomaaliya ayaa maanta waxa uu u fariistey ansixinta xukuumadii ka koobneyd 55ka xubnood,waxeyna dood iyo falaqeyn kadib r/wasaaraha C/weli Sheekh Axmed ayaa loo ogolaadey in uu barlamaanka ka hor sheego barnaamijka xukuumada uu hugaamiyo ay ku shaqeyn doonto. R/wasaaraha ayaa barlamaanka ka hor aqriyey barnaamijka ay wadato...
R/wasaaraha dawlada federalka C/weli Shekh Axmed oo barlamaanka ka codsadey hakinta hindise sharciyedyo.
Ra'iisalwasaaraha dawlada federalka C/weli sh Axmed ayaa barlamaanka soomaaliya ka codsadey in la hakiyo ka doodista hindise sharciyeedyadii ay soo gudbisey xukuumadii uu hugaaminayey r/wasaarihii hore dr Saacid inta uu kasoo dhisayo xukuumada la filayo in uu dhawaan ku dhawaaqo. Lama oga sababta ka danbeysa iyo culeyska ay ku hayaan...
Magaalada Galkacyo oo Xaley Gabar Toorey Lagu Dilay iyadoo Dhawaan toogasho lagu Xukumey Rag Gabar Dilkeed Lagu Eedeeyey.
Wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug gaar ahaan xaafadda Garsoor ayaa sheegaya in xalay rag dhalinyaro ah xalay toorey ku dileen mid ka mid ah Gabdhaha ku dhaqan magaalada oo xiligaa sida la sheegay ka soo baxday tukashada Salaada Taraawiixda. Nimco Cumar Shire ayaa u geeriyootay dhaawac...
Madaxii maaliyada iyo warfaafinta ururkii Xisbul islaam C/fitaax oo nabadsugidu kala baxdey Hotel Jazeera.
Xoghayihii maaliyada iyo warfaafinta C/fitaax max'd ayaa la sheegayaa in la xirey isagoo jooga ama degen Hotel Jazeera. C/fitaax ayaa waxaa uu la socdey Shekh Xasan Daahir Aweys kaas oo la sii daayey markii sheekha la xirey,xoghayaha ayaa waxaa hotel jazeera kala baxey ciidamada nabadsugida uu hugaamiyo Bashiir Goobe iyadoon...
Sheekh Axmed Maxamed Islaam (axmed madobe) oo loo diidey in uu kismaayo kasoo dego.
Axmed Maxamed islaam Axmed madobe ayaa ku xayiran kenya magaalada nairobi kadib markii ay isku dhaceen oo is khilaafeen ku xigeenkiisii Macalin Maxamed,kaas oo hada kamid ah wasiirada uu dhawaan magacaabey. Macalim Maxamed Ibraahim ayaa ah hugaamiye adag oo soo hugaamiyey jabhadii raskampooni wuxuuna gabi ahaan kasoo horjeedaa siyaasadda uu...
W/kaluumeysiga Soomaaliya oo Dawladda Iran Ka Dalbatey Jawaab In ay Ka Bixiso Kaluumeysiga Badda Soomaaliya.
Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Soomaaliya ayaa Iiraan ka codsatay inay soo bandhigto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan howlaha maraakiibteeda ay ka wadaan Badweynta Hindiya ka dib markii dhowr ka mid ah lagu arkay biyaha Soomaaliya iyo Yemen. Wasiirka Kalluumeysiga ee Soomaaliya Abdullahi Bidhaan Warsame ayaa sheegay inay jiraan walaac...
1...1,6381,6391,640...1,653Page 1,639 of 1,653